प्रतिबन्ध तोड्दै रुपन्देहीमा “विप्लव”को युवा मार्च पास – On Khabar
May 19, 2019 onkhabarComment(0)
अनखबर / जेठ ५
सरकारले २ महिना अगाडीदेखि नै प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रुपन्देहीले आज रुपन्देहीको शुद्दोधन गाउँपालिका स्थित भुजौलिमा बृहत युवा मार्छ पास गरेको छ ।
प्रतिबन्ध पछि भुमिगत जस्तै बनेका सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु मार्चपासमा रातो फेटा बाधेर पार्टीका नाराहरु लगाउदै झन्डै आधा घण्टासम्म र्याली गर्दासमेत प्रहरीले भने सुईको पाएन । सो पार्टी समर्थित नेता कार्यकर्ता खोजिरहेको प्रहरीले यस्तो कार्यक्रमहरु हुदासमेत पत्ता पाएन जहाँ सो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए। र्यालिपछी सम्बोधन गर्दै पार्टीका नेता नविनले प्रतिबन्धले क्रान्तिकारी पार्टीलाई आत्मसर्मर्पण होईन, दृढ र एकताबद्द बनाएको छ, यसले हामिलाई भन्दा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ, उनले भने । यस्तै सम्बोधन गर्दै अर्का युवा नेता प्रकाशले पनि प्रतिबन्ध क्रान्तिको लागि अवसर हुने र दलालको लागि झटारो हुने टिप्पणी गरे ।
नेकपाले पछिल्लो समय प्रतिबन्ध चिर्दै शान्तिपुर्ण कार्यक्रम तथा संगठनात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईरहेको एक नेताले बताए । रुपन्देहिमा भएको मार्चपास जस्तै अन्य शान्तिपुर्ण कार्यक्रमहरु पार्टीको रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
‘विप्लव’ नेकपासँग त्रसित हुदै सरकार, प्रकाण्ड लगायतका नेतालाई पुन पक्राउ पुर्जी !
December 28, 2018 December 28, 2018 onkhabar
Spread the love अनखबर पौष १३, काठमाडौं विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सरकार त्रसित हुँदै गएको देखिन्छ । लामो समय हिरासतमा राख्दै मुद्दा सावित गर्न नसकेपछि छोडिएका सो पार्टीका का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ विरुद्ध पुन पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सरकार त्रसित भएको पुष्टि भएको हो । जिल्ला अदालत भोजपुर र संखुवासभाको छुट्टाछुट्टै आदेशअनुसार जिल्ला प्रहरी […]
यस्तो छ नेकपाको बन्दको प्रभाव, बुटवलमा बम फेला, नवलपरासीमा ठूलो बम बिस्पोट देशभर कहाँ के भयो ?
March 14, 2019 March 14, 2019 onkhabar
Spread the love ्अनखबर बुटवल फागुन ३० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको नेपाल बन्दले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दको क्रममा अज्ञात समूहले काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, स्याङजा, नलपरासी, झापा लगायत देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा बम राखेको छ । बन्दका कारण लामो र छोटो दुरीका कुनै पनि सवारी साधनहरु चलेका छैनन् । सडक चारैतिर सुनसान रहेको […]
सरकार भन्छ – चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ, कांग्रेस भन्छ – हुन दिन्नौ ! अब के होला ?
Spread the love अनखबर १० माघ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा। गोविन्द केसीका मागहरु शत प्रतिशत पूरा हुने दाबी गरेको छ । साथै संसदबाट यो पास गरिछाड्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रष्ट पारेका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले विधेयक फिर्ता लिने वा हुने सम्भावना […]